वामपन्थी पुस्तकका पाठक- विविधा - कान्तिपुर समाचार
माक्र्सवाद, लेनिनवाद र कम्युनिजमका बारेमा कार्यकर्ताहरूमा घट्दै गएको पठन संस्कृतिलाई उकास्न विद्यालय खुलेको छ । तर वर्तमान पुस्तक बजारको बिक्री शून्यताले दिने सन्देश भनेको चैं– ‘जब विचार र सिद्धान्तको बहसलाई समृद्धि र आर्थिक विकासका सपनाले अँचेट्छ, पाठकहरू त्यसै हराउन थाल्छन् ।’ प्रकाशित : आश्विन १३, २०७५ ०८:०६
चैत्र ३, २०७४ शिशिर वैद्य
काठमाडौँ — तिब्बतमा बौद्धमार्गी र नेवारी तान्त्रिक कला विषयका अध्येता ब्रिटिस नागरिक रोबर्ट वियरका अनुसार विश्वका विभिन्न देशका संग्रहालयमा अरनिकोका कृति संगृहीत छन् । चिनियाँ सम्राट कुब्लाई खाँ र रानी छावीको चित्र ताइवानको राष्ट्रिय संग्रहालय पुगेको छ ।
अवलोकितेश्वरी ताराको चित्र अमेरिकाको क्लिभल्यान्ड कला संग्रहालयमा छ । महाँकालको मूर्ति पेरिसको संग्रहालयमा छ ।
ललितपुर महानगरपालिकाको प्रांगणमा महिनौंदेखि प्लास्टिकको घुम्टो ओढेर बसेको एउटा मूर्ति अनावरणको पर्खाइमा छ । मूर्ति राष्ट्रिय विभूति अरनिकोको हो । बलबाहु, आनिक, पालापु थुप्रै नामहरू रहे पनि नेपालीको मनमस्तिष्कमा बसेको नाम हो अरनिको । ‘सय जना कालीगढको नाइके बनेर तिब्बत गएका थिए उनी । सत्र वर्षकै उमेरमा नै चित्रकला, मूर्तिकला, संगीतकला, ढलोटकला आदि अनेक शिल्पकलामा निपुण थिए उनी । बौद्ध दर्शनमा समेत राम्रो दख्खल राख्थे । अद्वितीय कला प्रवीणता, कार्यकुशलता र विद्वता भएका अरनिकोले तिब्बतमा स्वर्ण स्तूपा निर्माण गरे । चीनका सम्राट कुबलाई खाँको इच्छा एवं आदेशबमोजिम राजधानी तातु (हाल बेइजिङ) मा पाई था अथवा ‘श्वेत चैत्य’ बनाए । उच्च ओहदा लिएर चीनमै घरजम गरेर बसे... ।’ सबैले पढेको अरनिको–कथा यही हो । तर अरनिको अझै मिथ नै छन् हाम्रा लागि ।
‘श्वेत चैत्य’ लाई नेपाल–चीन मित्रताको द्योतक मानिन्छ । देशको यश बढाउने काम गरेका थिए यी अनेक प्रतिभाका धनी, वास्तुविद्ले । ‘अरनिकोले आफ्नो शिल्पकलाले नेपालको वास्तुशैली र ललितकलाका विभिन्न विधालाई तिब्बत, चीन अनि दक्षिण पूर्वी एसियाका अन्य देशहरूमा फैलाए । शिल्पकलाको क्षेत्रमा यी देशहरूलाई उनले नेपालको ऋणी बनाए,’ इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यले लेखेका यी पंक्तिले अरनिकोको देन तिब्बत र चीनमा मात्र सीमित थिएन भन्ने प्रमाणित गर्छ ।
तर किन अझै मिथ छन् त अरनिको ? उनका कृतिहरूका केही अवशेष किन भेटिंदैन यहाँ ? भए, कस्तो अवस्थामा होलान् ? किन शोध र अनुसन्धान भएन उनको बारेमा ? कसबाट सिके होलान् उनले कलाकारिता ? कस्ता थिए होलान् उनी ? आनिक, बलबाहु, पालापु, अरनिको, के होला उनको खास नाम ? उनी जन्मेको सही साल कुन होला ? (कसैले १२४३ लेखेका छन्, कसैले १२४४ (इसं) । जन्म स्थान ? कुल ? के थियो ? तिब्बत र चीनमा उनले बनाएका अन्य कलाकृति कहाँ कस्तो अवस्थामा छन् ? यस्ता थुप्रै विषयअझै अनुत्तरित छन् । नेपाली वास्तुविद्, कलाकार तथा राज्य किन मौन छ यस विषयमा ?
यिनै खुल्दुली मेट्ने प्रयासमा भेटिएको थियो संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीलिखित पुस्तक ‘कलाकार अरनिको–द वेलनन नेपाली आर्किटेक्ट’ । तीन दशकअघि २०४४ सालमा प्रकाशित पुस्तक अरनिकोको विषयमा लेखिएको पुस्तकमा लेखकले चीनमा बस्दा अरनिकोका बारेमा भेटेसम्मको इतिहास संकलन गरेका छन् । जोशीले ‘नेपालया राष्ट्रिय विभूति कलाकार अरनिकोया श्वेत चैत्य’ शीर्षकमा महाकाव्य नै लेखेका छन् । महाकाव्य नेपालभाषामा लोकशैलीमा लेखिएको छ । जोशीका कृतिमा संकलित अभिलेख तथा तस्बिरहरू कीर्तिपुरस्थित नेपाल भाषा प्रतिष्ठान हलको भित्तामा सजिएका छन् । मीनबहादुर शाक्यको अरनिकोलाई जीवित राख्ने यो प्रयास सराहनीय छ । अरनिको र नेपाली वास्तुकलाको इतिहासमा जोशीको यो अतुलनीय देन हो ।
चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत निरञ्जन भट्टराईलिखित २०१८ सालमा प्रकाशित ‘चीन र त्यससित नेपालको सम्बन्ध’ पुस्तकमा अनुसन्धानात्मक छुट्टै एक परिच्छेद छ पुस्तकमा, आनिक शीर्षकमा । भट्टराई लेखेका छन्, ‘आनिकको विषयमा पूर्ण अनुसन्धानको निम्ति युवान साम्राज्यकालको इतिहास र समकालीन सम्बन्धित साहित्यको अध्ययन अत्यन्त आवश्यक छ ।’ भट्टराईले लेखेजस्तै अरनिको र उनको कृतिका विषयमा हामी जति पनि कुरा गर्छौं ती सबको आधार चिनियाँहरूले लेखिदिएको इतिहास रहेको देखिन्छ ।
अर्थात् अरनिकोको विषयमा हामी चिनियाँ इतिहास र इतिहासकारमा आश्रित छौं । हाम्रो इतिहासले अरनिकोका बारेमा ठोस बोलेको कहीं कतै भेटिंदैन । त्यसैले संस्कृतिविद् जोशीले लेखेका छन् ‘चिनियाँ इतिहासले नेपाली कलाकार अरनिकोको जीवनी र अमर कलाकृतिलाई सुनको अक्षरले लेखेर वास्तवमै नेपालीहरूलाई ऋणी बनाएका छन् । किनभने यदि अरनिकोको बारेमा उनीहरूले पनि केही उल्लेख नगरिदिएको भए उनको बारेमा हामी अनभिज्ञ नै हुने थियौं । न नेपाली वंशावलीमा चीन गएका कलाकार अरनिकोको बारेमा कहीं कतै उल्लेख छ, न उनले बनाएको कलाकृति भनेर चिन्ने कुनै वस्तु नै छ ।’
के छ त चिनियाँ इतिहासमा ? हामी अरनिको भन्छौं, चिनियाँहरू आनिक भन्छन् । श्वेत चैत्यलाई उनीहरू पाइथा भन्छन् । अरनिकोसँग सम्बन्धित युवान साम्राज्यकालको चिनियाँ इतिहास खोज्ने क्रममा भेटिए केही पुस्तक र इन्टरनेट सर्च गर्ने क्रममा पाइए केही अनुसन्धानपत्र । चिनियाँ पुरातत्त्व अन्वेषक तथा इतिहासकारहरूले चीनमा भेटिएका शिलापत्र तथा विभिन्न शासकहरूको वंशावलीमा कुँदिएका विवरणका आधारमा अरनिकोबारे थुप्रै खोजमूलक पुस्तक तथा अनुसन्धानपत्र तयार पारेका छन् । केही अंग्रेजीमा र धेरैजसो चिनियाँ भाषमा । तर चिनियाँ इतिहासकारहरूले प्रस्तुत गरेका केही तथ्य आपसमा बाझिन्छन् । कतै श्वेत चैत्य अरनिकोले पुनर्निर्माण मात्र गरेको लेखिएको भेटिन्छ । कतै अरनिको तिब्बत गएको साल त कतै उनको जन्ममिति फरक भेटिन्छन् । तर त्यसका बाबजुद पनि बिर्सन नहुने कुरा के हो भने, चीनले शताब्दीऔं अघि आफ्नो देशमा आएका नेपालका बहुप्रतिभाशाली कलाकार तथा वास्तुविद् र उनले तयार पारेका कृतिहरूलाई निकै सम्मानका साथ संरक्षण
२०२९ सालको पहिलो दिन पहिलो टाँचा लागेको हुलाक टिकटमा अंकित थियो उनै अरनिकोको प्रतिमा । टिकटले सात सय वर्षअघिदेखि मिथका रूपमा रहेका एक यशस्वी कलाकारलाई आधिकारिक कदर प्रदान गरेको थियो । आधिकारिक यसकारण कि यो राज्यको तर्फबाट तयार पारिएको थियो ।
ठिटौलो केटो, दौरा–सुरुवाल लाएको, कम्मरमा पटुकी, देब्रे काँधमा गम्छा, भादगाउँले टोपी अनि हातमा कुची, औजार र कागजको बिटो । कसरी गरे होलान् कलाकारले कुनै ठोस प्रमाणबेगर आकृतिको कल्पना ? मनमा उर्लेका तर्कनाले फेरि अर्कै मोड लियो । यो त कुनै पनि कलाकारका लागि सजिलो काम अवश्य हुँदैन ! बुझ्दै जाँदा थाहा भयो । पैंतालीस वर्षअघि अरनिकोलाई हुलाक टिकटमा सजीवजस्तै लाग्ने गरी प्रतिमाकृत गरेका थिए, वरिष्ठ कलाकार कान्छाकुमार कर्माचार्य (केके कर्माचार्य) ले । कसरी बन्यो त यो आकृति ? कर्माचार्यसँगको भेटमा पहिलो जिज्ञासा यही थियो । अरनिकोलाई प्रतिमाकृत गर्नुअघि भेटेसम्म स्रोतहरूको अध्ययन गरेका थिए कर्माचार्यले । तर अध्ययन त्यति सजिलो थिएन । न कुनै अनुसन्धान भएका थियो, न कुनै ठोस प्रमाण थिए । थिए त केवल केही किंवदन्ती र लोकोक्ति ।
ह्षीकेश शाहको पुस्तक ‘हिरोज एन्ड बिल्डर्स अफ नेपाल’ मा भेटिएको अरनिकोको एक स्केच थियो उनीसँग । कलाकार अमर चित्रकारको कृति । त्यसबाहेक थियो पचास मिटर अग्लो ‘पाई था’ अर्थात् ‘श्वेत चैत्य’ को तस्बिर । केही रंगीन केही श्यामश्वेत । चिनियाँ भाषाका शिलापत्र र चिनियाँ इतिहासका केही पुस्तकहरू प्रमाणका रूपमा भए पनि ती नेपाली वा अंग्रजीमा थिएनन् । त्यसैले ती हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ थिएन । आकृति बनाउनुअघि केही समकालीन र केही वरिष्ठ कलाकारहरूसँग सल्लाह लिन खोजे उनले । तर चित्तबुझ्दो सल्लाह कतैबाट पाएनन् । श्वेत चैत्य भ्रमण गरेर फर्केका नेपालीहरूसँगको छलफल कर्माचार्यका लागि निकै फलदायी रहयो । मुहार चित्र कर्माचार्यको विशेषता हो । तर अरनिकोको मुहार कस्तो बनाउने भन्दा पनि सात शताब्दीअगाडि कस्तो पहिरन थियो भन्ने चिन्ताले बढी पिरोलेको थियो उनलाई । यसका लागि उनी मानवशास्त्री डोरबहादुर विष्टसँग सल्लाह लिन पुगे । सल्लाहपछि उनी अरनिकोलाई नेपालीपन झल्किने आवरण दिने निष्कर्षमा पुगे । र तयार भयो अरनिकोको आकृति । अरनिकोको आकृतिसहितको टिकट डिजाइन गरिसक्दाको आत्मसन्तुष्टि कर्माचार्यको मुहारमा अझै देखिन्छ ।
कर्माचार्यकै आकृतिमा आधारित अरनिकोको पूर्ण कदको सालिक बेइजिङस्थित श्वेत चैत्य परिसरमा प्रतिस्थापित छ । ‘यो चिनियाँहरूले गरेको मेरो कलाको सम्मान हो,’ कर्माचार्य भन्छन् । धुलिखेलमा रहेको अरनिकोको अर्धकदको सालिक र ललितपुर महानगरको प्रांगणमा अनावरण हुन बाँकी सालिक कर्माचार्यकै चित्रमा आधारित छन् ।
नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद्ले अरनिकोको मूर्ति बनाउने निर्णय पारित गरेको वर्षौं बितिसकेको छ । बजेट पनि निकासा भइसकेको छ । तर प्रथम प्राज्ञ परिषद्को कार्यकाल सकिएपछि मूर्ति बनाउने निर्णय फाइलमा थन्किएको छ । यसले प्राज्ञहरूबीचको कलहले एक महान् कलाकारले राज्यको तर्फबाट पाउने सम्मान ओझेलमा परेको छ ।
‘इतिहास लेख्ने परम्परा नरहेको परिप्रेक्ष्यमा अरनिकोका ती अमूल्य सांस्कृतिक सम्पदाबाट हामी वञ्चित मात्रै हुनुपरेको होइन, त्यससम्बन्धी यथार्थ तथ्य र जानकारीबाट पनि अनभिज्ञ हुनुपरेको छ । अरनिको हाम्रा लागि यस्ता दृष्टान्त हुन् जसको सम्बन्धमा हाम्रो इतिहास केही बोल्दैन । हाम्रोमा त्यसको वृत्तान्त कतै पाइँदैन ।’ साहित्यकार कृष्णचन्द्रसिं प्रधानले नेपाली इतिहासकारहरूलाई अरनिकोका विषयमा खोज गर्न तीस वर्षअघि नै यसरी झकझकाइसकेका थिए । तर अझै पनि अरनिको खोज्न हामी चिनियाँ इतिहास पल्टाउन बाध्य छौं । न ललितकला, न वास्तुकला, उच्च शिक्षाका कुनै पनि पाठयक्रममा अरनिको विषय समाविष्ट छैन । यति महान् वास्तुविद् एवं कलाकारको विषय पाठयक्रममा किन समावेश नगरिएको होला ? कला शिक्षकहरू भन्छन्, ‘के पढाउने ? पढाउनलाई केही त हुनुपर्‍यो नि स्रोत सामग्री ?
तिब्बतमा बौद्धमार्गी र नेवारी तान्त्रिक कला विषयका अध्येता ब्रिटिस नागरिक रोबर्ट वियरका अनुसार विश्वका विभिन्न देशका संग्रहालयमा अरनिकोका कृति संगृहीत छन् । चिनियाँ सम्राट कुब्लाई खाँ र रानी छावीको चित्र (पेन्टिङ) हाल ताइवानको राष्ट्रिय संग्रहालय पुगेको छ । अवलोकितेश्वरी ताराको चित्र अमेरिकाको क्लिभल्यान्ड कला संग्रहालयमा छ ।
महाँकालको मूर्ति पेरिसको संग्रहालयमा छ । तीन ठूला स्तूपा, नौ बौद्ध मन्दिर, चिनियाँ धर्म गुरु कम्फुसियसको चिहान, ताओ मन्दिर आदि थुप्रै कृतिहरू अरनिकोले बनाएका थिए । चिनियाँ अभिलेखहरूमा भेटिने यी कृतिहरू कस्तो अवस्थामा छन् ? कहाँ–कहाँ छन् ? यसबारे भेटिंदैनन् ।
सन् १३०६ मार्च ११ मा अरनिकोको मृत्यु भएको हो भनी उनको समाधिस्थलमा लेखिएको छ । तर जन्म कुन महिना र गतेमा भएको थियो भन्ने अझै यकिनसाथ भन्ने आधारहरू छैनन् । यसले नेपाली वास्तुविद्, कलाकार र इतिहासकारहरूका सामु अरनिकोबारे थुप्रै प्रश्नको जवाफ खोज्ने दायित्व बाँकी रहेको देखाउँछ ।